Backgammon🥇 Emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
Backgammon: တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုကစားရမလဲ။ 💡
backgammon ကိုအွန်လိုင်းတွင်အခမဲ့ကစားရန် အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များကဤအဆင့်ကိုလိုက်နာပါ:
ခြေလှမ်း 1 ။ သင်နှစ်သက်သောဘရောင်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ဂိမ်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ Emulator.online ။
ခြေလှမ်း2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသပြီးပြီဖြစ်သည်။ "ကိုနှိပ်ပါ"ကစားရန် " နှင့်သင်ကစားနိုင်သည်၊ စက်ကိုဆန့်ကျင်။ ကစားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကစားပါ
3 အဆင့်။ ဒီမှာအသုံးဝင်တဲ့ခလုတ်အချို့ရှိတယ်။ လုပ်နိုင်အသံထည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ"ကစားသည်"ကစားနိုင်ပြီ၊ ကစားနိုင်ပြီ"ခေတ္တရပ်နားသည်"နှင့်"ပြန်လည်စတင်ပါအချိန်မရွေး
4 အဆင့်။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်မတိုင်မီဘုတ်အဖွဲ့ကိုချွတ်အားလုံးအပိုင်းပိုင်းရယူပါ.
Backgammon အဓိပ္ပါယ် 🙂
နှုတ်ကပတ်တရားတော် backgammon ဂိမ်းတစ်ခုအားပေးသောနာမည်ဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရောင်များကိုအုပ်ကြွပ်၏ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် ဖွဲ့စည်းသည် များသောအားဖြင့်တစ် ဦး အပြားမျက်နှာပြင် ပျဉ်ပြား၊ ဤအရပ်မှ၎င်း၏အမည်ကို။
ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက်မတူညီသောစည်းမျဉ်းများအရ၊ တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောလူများပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သောဂိမ်းများတွင်ပါဝင်သူများအနေဖြင့်နည်းဗျူဟာသို့မဟုတ်နည်းဗျူဟာကျကျကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု၊ ညှိနှိုင်းမှု၊ လက်စွဲစွမ်းရည်၊ မှတ်ဉာဏ်၊ နှုတ်ယူနိုင်စွမ်းသို့မဟုတ်အခြားစွမ်းရည်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သော်လည်းအခြားဂိမ်းများသည်အခွင့်အလမ်းသာဖြစ်သည်။
၎င်း၏သဘောသဘာဝအရ, ဂိမ်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကာယလှုပ်ရှားမှုမပါ ၀ င်ပါ။ အချို့သောစားပွဲပေါ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်အပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများထွက်သယ်ဆောင်ပေမယ့်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကိုများသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများသို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည် ၎င်း၏အထူးဝိသေသလက္ခဏာများအရသိရသည်။
သူများ အန်စာတုံးကိုသုံးပါ: သူတို့ကဂိမ်းတွေပါ သူတို့အန်စာတုံးကိုအသုံးပြုသည် သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်တူညီသောအပိုင်းအစများ Tauli, Ludo, ပန်းခြံများ, Backgammon, အခြားသူများအကြားမြွေနှင့်လှေကား။
သူများ သူတို့တိုကင်ကိုသုံးတယ် သူတို့ကအစအသုံးပြုကြသည် တိုကင်ကိုသုံးသောဂိမ်းများ အဓိကဒြပ်စင်အဖြစ်။ ဂိမ်းအမျိုးအစားဤဥပမာ၏ဖြစ်ကြသည် အဆိုပါအဖြစ် ဒိုမီနို သို့မဟုတ် Mahjong.
ရိုးရာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြေ - ဒါတွေဟာမိသားစုဂိမ်းတွေလိုမျိုးဘုတ်အဖွဲ့မှာကစားတာဖြစ်တယ် စစ်တုရင် (အနောက်စစ်တုရင်၊ Xiangqi သို့မဟုတ် Shogi "တရုတ်စစ်တုရင်" သို့မဟုတ် "ဂျပန်စစ်တုရင်"၊ ဂျန်ဂျီသို့မဟုတ် "ကိုရီးယားစစ်တုရင်" သို့မဟုတ် Makruk ဟုလည်းခေါ်သည့်ထိုင်းစစ်တုရင်)), မင်းသမီးတရုတ်စစ်တုရင်၊ Hnefatafl (ဂျာမန်မိသားစုဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ)၊ မန်ချလာ (မိသားစုဘုတ်ဂိမ်းနှင့် Surrta) ။
ခေတ်ပြိုင်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ၎င်းသည် "ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ" ဟုခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော်လည်းဤဂိမ်းများကိုထိုနည်းဟုလည်းခေါ်သည်။ အများအားဖြင့်၎င်းဂိမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဘရာဇီးကမ္ဘာကစစ်ပွဲများကိုလူကြိုက်များတဲ့နေရာမှာစစ်ပွဲဂိမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။
multiplayer ဂိမ်း: သူတို့ကအချို့ကိစ္စများတွင်ပူးတွဲနိုင်ပါတယ် သုံးယောက်ထက်ပိုသောကစားသမား, ဒါပေမယ့်သူတို့ကမှန်မှန်နှစ်ခုကစား။ ၎င်းတို့အနက်ညများဖြစ်သည်ရိုးရာကဒ်ဂိမ်းများကို, ပြင်သစ်သို့မဟုတ်စပိန်ကုန်းပတ်နှင့်အတူဖြစ်စေ; သို့မဟုတ်ဂျပန်၌ရိုးရာဖြစ်သော Hanafuda ကဲ့သို့ကဒ်ဂိမ်းများ။
ကဒ်ဂိမ်း၏ခေတ်သစ်နှင့်စီးပွားဖြစ်မူကွဲသည် Magic: The Gathering (သို့မဟုတ်) Yu-Gi-Oh ကဲ့သို့သောစုဆောင်းနိုင်သောကဒ်ဂိမ်းများ!.
သူတို့ကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်မှာတီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ် တစ်စုံတစ်ယောက်သည်များသောအားဖြင့်ကစားသမားများကိုတိကျသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုသို့အောင်မြင်ရန်စစ်ဆေးမှုများကိုခွင့်ပြုသည့်သီးခြားအခြေအနေများတွင်ထားလေ့ရှိသည် သူတို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကြသည်။
တကယ်တော့, Backgammon ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်အခန်းကဏ္ play မှဖြစ်ပြီးစားပွဲပေါ်မှာအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Dungeons & Dragons သည်သူရဲကောင်းစိတ်ကူးယဉ်ဟုခေါ်သော backgammon အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်မကြာမီဈေးကွက်သို့ဝင်လာသည်။ အနောက်နိုင်ငံများ၊ လိင်များ၊ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ အာကာသအော်ပရာ၊ ရူပဗေဒထိတ်လန့်မှု၊ ခိုးကူး
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Backgammon သည် gamen ဟူသောစကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည် (အလယ်ခေတ်အင်္ဂလိပ်မှ)ဂိမ်းကိုဆိုလိုသည်။
Backgammon မိသားစု၏ဂိမ်းများသည် ပေါ်ထွက်လာဖို့ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်အန်စာတုံး (သို့) အခွံ၊ အစေ့၊
ဒီမိသားစုတွင် Senet (ဂိမ်းတစ်ခုကို Tutancamon ၏သင်္ချိုင်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်)၊ Nyout (ကိုရီးယားဂိမ်း)၊ Patolli (Aztecs ၏အနှစ်သက်ဆုံးဂိမ်း)၊ Pachisi (အိန္ဒိယအမျိုးသားကစားပွဲ) အပါအဝင်ထင်ရှားသောဂိမ်းများစွာပါဝင်သည်။ Ludo နှင့် Chispa) နှင့် the the Goose of the Game (၁၈ ရာစုတွင်လူကြိုက်များသောဥရောပဂိမ်းတစ်ခု) ဖြစ်သည်။
ဒါဟာ Backgammon ကြောင်းပြောနိုင်ပါသည် အများအပြားအသွင်ပြောင်း၏ရလဒ် နှင့်ယနေ့ခေတ်မှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသောအခြားရှေးဟောင်းဂိမ်းများနှင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည်။ ယင်း၏မူလအစသည်ရှေးခေတ်ဆူမီရီယန်နှင့်အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဆက်နွှယ်နေနိုင်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်နှင့်သိပ်မကွာလှသည့် panel များကိုအီဂျစ်ရှိနိုင်းလ်ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားရှိဥဂူဝန်းကျင်ရှိသင်္ချိုင်းများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၈၀၀ မတိုင်မီကပါရှားမှာ Nard လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ သူတို့ဟာ ၇ ရာစုအတွင်းမှာပါရှားကိုအနိုင်ရခဲ့ချိန်မှာအာရပ်တွေဟာဒီဂိမ်းအပြင်အခြားဂိမ်းများကိုသိပြီးသားဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပါရှားသည်ဤဂိမ်းများကိုဟိန္ဒူများထံမှသင်ယူခဲ့ပြီးတရုတ်လူမျိုးမှတစ်ဆင့်သူတို့သိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအာရပ်တွေကဒီဂိမ်းကိုအရေးပါတဲ့အဆင့်အထိမြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့အကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးစာအုပ်တွေရေးခဲ့တယ်။ Nard နှင့်၎င်း၏မျိုးကွဲများကိုအာရှရှိနေရာများစွာတွင်တွေ့ရှိရသည်။
Nard ဂိမ်းကိုဥရောပမှာအာရပ်တို့ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး Tabula ဂိမ်းနဲ့ရောပြီးဗားရှင်းအသစ်ရခဲ့တယ်။ ၂၄ မှတ်ဘုတ်တွင်အပိုင်း ၃၀ ကို အသုံးပြု၍ လှုပ်ရှားမှုကိုအန်စာတုံး ၂ ခုဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
ဆယ်ခုနစ်ရာစု၌ထ အစိတ်အပိုင်းတိုးတက်မှုများနှင့်အတူဂိမ်းအသစ်နှင့်ဥရောပတစ်ခွင်ပျံ့နှံ့သွားစေသည့်မူကွဲအသစ် သူဟာအင်္ဂလန်မှာလူသိများလာတယ် နောက်ခံဂေါ်ဖီ၊ စကော့တလန်တွင် Gammon၊ ပြင်သစ်တွင် Trictrac၊ ဂျာမနီတွင် Puff၊ စပိန်တွင် Tablas Reales နှင့်အီတလီတွင် Tavole Reale တို့ဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီချက်ချင်းပင်လောင်းကစားအဖျားရှိခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်မှပြုလုပ်သောတီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ကစားအမှတ်များ၏တန်ဖိုးကိုနှစ်ဆဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, ဂိမ်းကျဆင်းသို့သွားလေ၏။
1970 ခုနှစ်တွင်မမျှော်လင့်ဘဲ နောက်တဖန်လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်, ယနေ့အစိတ်အပိုင်းများနှင့်လက်စွဲနှစ်ခုလုံးကိုဝယ်ခြင်းငှါအလွယ်တကူသောအချက်အထိ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ Trictrac သည်ကျော်ကြားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးလက်ဘနွန်နှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာကစားသည်။
Backgammon ကစားရန်အတွက်သင်တွင်ပါ ၀ င်သူ ၂ ဦး၊ ကျောပိုးအိတ်ဘုတ်၊ အနက်ရောင်ကြွေပြား ၁၅ ခု၊ အဖြူရောင် tile ၁၅ လုံးနှင့်ဂန္ထဝင် ၆ ခုဘက်အန်စာတုံး ၂ ခုပါ ၀ င်သည်။
ကစားသမားများ - 2
စိတျအပိုငျး သို့မဟုတ်ကျောက်တုံးများ - ၁၅ အနက်ရောင်၊ ၁၅ အဖြူရောင်
ဘုတ်အဖွဲ့ - ၆ ခုမှ ၆ ခုအထိအုပ်စုကွဲပြီး ၄ ပိုင်းခွဲခြားထားသည်
ရည်ရွယ်ချက် - ပြိုင်ဘက်မတိုင်မီဘုတ်မှကြွေပြားအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အမြန်အကျဉ်းချုပ် Backgammon စည်းမျဉ်းများ:
ပစ်မှတ်အိမ်တွင်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး တည်းသာပါက၎င်းကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်
စတင်ပါ သင်၏ဘုတ်အဖွဲ့မှသင်၏အပိုင်းပိုင်းဖယ်ရှားလိုက်ပါ သူတို့ကနောက်ဆုံး quadrant ၌ရှိကြ၏အခါ
backgammon ၏ဂိမ်းသည်ရိုးရာဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည် အနိုင်ရသူသည်သူ၏အပိုင်းအစအားလုံးကိုဘုတ်အဖွဲ့မှပထမဆုံးဖယ်ရှားပေးသူဖြစ်သည်။
သင်ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါက ပြည့်စုံသောစည်းမျဉ်းများ, ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအောက်တွင်ထားခဲ့ပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးကစားသမား၏အဓိပ္ပာယ်
backgammon ၏ဂိမ်းကိုမည်သူစတင်သည်ကိုသတ်မှတ်ရန်။ တစ် ဦး ချင်းစီကစားသမား 1 သေလှိမ့်ထားရမည်။ မည်သူမဆိုအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရရှိသောသူသည်ပထမဆုံးကစားရမည်။ အကယ်၍ လည်စည်းတစ်ခုတွင်ပထမဆုံးကစားသမားကိုသတ်မှတ်သည့်တိုင်အောင်အန်စာတုံးကိုထပ်မံထုတ်လွှတ်သည်။ အဆုံးစွန်သောသူတို့သည်ပထမကစားမည့်အန်စာတုံး၏တန်ဖိုးကို အသုံးပြု၍ ပထမခြေလှမ်းကိုယူရမည်။
နမူနာကစားသမား A သည်သေဆုံးပြီး ၅ ကိုရရှိသည်။ ကစားသမား B သည်သေဆုံးသည်နှင့်တန်ဖိုး ၅ ကိုရရှိသည်။ ကစားသမား A သည်သေဆုံးခြင်းကိုထပ်မံလှိမ့်ပြီးတန်ဖိုး ၄ ရရှိသည်။ ကစားသမား B သည်သေဆုံးပြီး ၆ ကိုရရှိသည်။ ကစားသမား B သည်အန်စာတုံး (၄) နှင့် (၆) တို့၏ကစားနည်းများ (ကစားသမား A နှင့် B တို့မှကစားသောနောက်ဆုံးအန်စာတုံး၏တန်ဖိုးများ) နှင့်ပထမဆုံးကစားခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သူသည် backgammon match ဖြစ်နေသည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အဆင့်တွင်ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်လိုအပ်သည်2အန်စာတုံးကိုလှိမ့်ခြင်းနှင့်ဒေတာတန်ဖိုးများအရသိရသည်သင်၏အပိုင်းပိုင်းရွှေ့။
ကစားသမားတိုင်း အပိုင်းပိုင်းရွှေ့ပါ တလမ်းတည်းဖြင့် တစ်နာရီ၊ နာရီတစ်လုံးကတစ်နာရီ။
အပိုင်းအစ၏ပစ်မှတ်ထားအိမ်သူအိမ်သားနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပြိုင်ဘက်ရဲ့အပိုင်းပိုင်းရှိပြီးတ ဦး တည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ပစ်မှတ်ထားသည့်အိမ်တွင်ဆန့်ကျင်ဘက်အပိုင်း ၁ ခုသာရှိပါက၎င်းအားဖမ်းယူပြီးဘုတ်မှထွက်ခွာ။ "ဘား" သို့သွားသည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖမ်းမိသောအပိုင်းအစများရှိပါကကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာသင်ဖမ်းယူထားသည့်အပိုင်းအစများကိုဘားမှဖယ်ရှားပြီး၎င်းတို့ကိုအိမ်ထဲထည့်ပြီးပစ်မှတ်ထားသည့်အိမ်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အပိုင်း ၁ ခုထက်မပိုသောစည်းမျဉ်းကိုအမြဲလိုက်နာသည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်သူ၏အန်စာတုံး (၂) ခု၌တူညီသောတန်ဖိုးများကိုလှိမ့်လျှင်ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှု (၂) ခုထက်အန်စာတုံး (တန်ဖိုး) ဖြင့်ရွေ့လျားမှု ၄ ခုပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်သူ၏အပိုင်းအစများကို Backgammon ဘုတ်မှဖယ်ထုတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်အောက်ပိုင်း quadrant တွင်ရှိလျှင် (အတွင်းပိုင်းအပိုင်းဟုလည်းခေါ်သည်) ။ အပိုင်းအစတစ်ခုကိုဖယ်ရှားရန်ကစားသမားသည်အန်စာတုံး၌ကျန်ရှိနေသောရင်ပြင်အရေအတွက်နှင့်ညီမျှသောပမာဏကိုလှိမ့်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်အဝေးဆုံးအပိုင်းများအတွက်သင်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုရရှိပါကထိုအပိုင်းများကိုဖယ်ရှားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - အဝေးဆုံးအပိုင်း ၄ ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ကစားသမား ၆ ဦး ယူလျှင်သူသည်ဤအပိုင်းအစများကိုဘုတ်မှဖယ်ရှားနိုင်သည်။